Uvele enkantolo osolwa ngokubulala abe-ANC | News24
Uvele enkantolo osolwa ngokubulala abe-ANC
PHOTO:Nokuthula khanyile UMbuyiselwa Bonginkosi Shabalala obevele kafushane enkantolo kamantshi eMgungundlovu ngoMsombuluko ebhekene namacala amabili okubulala.
UVELE kafushane eNkantolo kaMantshi eMgungundlovu ngoMsombuluko ebhekene namacala amabili okubulala osolwa ngokusoconga abesifazane ababili baseFedsem abebengamalunga e-ANC.
UMbuyiselwa Bonginkosi Shabalala (40), waseMaqeleni uboshwe ngoLwesine olwedlule kulandela ukubulawa ngesihluku kukaBadedile Ntshapa (54) noPhetheni Ngubane (60) abadutshulwa bevela emhlanganweni wegatsha le-ANC kuward 15 eMehlokazulu High School ngoLwesithathu olwedlule.
Kuthiwa laba ngesikhathi sebehamba bebuyela emakhaya, bavinjezelwa abasolwa abavele bavulela ngenhlamvu bebhekise kubona, uNkk Ntshapa washonela endaweni yesigameko kwase kuthi uNkk Ngubane washonela esibhedlela ngosuku olulandelayo.
Umsolwa evela enkantolo ezokuphepha beziqinile njengoba bekunamaphoyisa ophiko lwe-Tactical Response Team abeqaphe isimo ngeso lokhozi. Icala lakhe libe selihlehliselwa umhlaka 22 kuJuni inkantolo isaqinisekisa ikheli lakhe, ukuphepha kofakazi kanye nokuthi akanawo yini amacala ake amlahla phambilini okanye awahamba kwezinye izinkantolo.
UShabalala okuthiwa ungumnikazi wethaveni ubevele enkantolo ebigcwele ichichima amalunga omphakathi amanye abegqoke izikibha zenhlangano ye-ANC abethi afuna ukuzozibonela mathupha umsolwa. Bekulindeleke ukuba uShabalala avele nabanye abasolwa ababili kodwa kwabuye kwathiwa amacala abo ahoxisiwe ngoba ubufakazi obubaxhumanisa nalelicala bungekho.
Umshushisi uNkk Patti David utshele inkantolo ukuthi umbuso uyaphikisana nokuthi umsolwa anikwe ibheyili ngenxa yokuba bucayi kwecala abhekene nalo. Uveze ukuthi umsolwa uboshwe ngoba omunye wabashona akwazi ukuthi amgagule ngaphambi kokuba adlule emhlabeni.
Ummeli kaShabalala uMnuz Phumlani Fakude unikeze inkantolo ikheli elisha umsolwa angayohlala kulo uma inkantolo imunika ibheyili nokulindeleke ukuba liqinisekiswe umphenyi wecala.
Umsolwa akazange abuzwe ukuthi uyaliphika noma uyalivuma yini icala kodwa utshele inkantolo ukuthi uchazeliwe ngamacala abekwe wona wabe eseqinisekisa ukuthi uzofaka isicelo sebheyili.
Umsolwa ugcinwe esitokisini kuze kube uvela enkantolo futhi.